Relationship Archives - Pyone Pyone Lay
မချစ်ခဲ့ရင် မချစ်ခဲ့ဘူးပေါ့ .. လမ်းခွဲချိန်မှာတော့ ရိုးသားပါ
မချစ်ခဲ့ရင် မချစ်ခဲ့ဘူးပေါ့ .. လမ်းခွဲချိန်မှာတော့ ရိုးသားပါ ကိုယ့်က အစ ကတည်းက မချစ်ခဲ့ခြင်းတွေဟာ ပြဿနာမဟုတ်ဘူး ကိုယ်ညံ့လို့ ကိုယ်ခံxခဲ့ရတာပါ … ဘာကြောင့်လဲ မေးရင် ကိုယ်က အယုံလွယ်လွန်းတာကိုး .. ဒါပေမယ့် လမ်းခွဲချိန်မှာတော့ မချစ်ခဲ့ရင် မချစ်ခဲ့ဘူးပေါ့ အတတ်နိုင်ဆုံးရိုးသားပေးပါ … တချို့စိတ်တွေက ခန့်မန်းရသိပ်ခက်တယ် … ကိုယ့်ကို တကယ်လဲမချစ်ပါပဲနဲ့ ပြီးတော့ ထားရစ်ခဲ့တော့မယ့် အရေးကို ဒရမ်မာတွေခင်းပြီး မျှော်နေအောင် လုပ်ကြသေးတယ် … သူပြန်လာရင် အရန်သင့် ပြန်လာရအောင် ကိုယ့်ကိုစောင့်နေစေချင်တဲ့အချိုးတွေလေ … မဖြစ်နိုင်လို့ပါ …ဆိုတဲ့စကားတွေ သုံးကြတယ် ဘာကြောင့်မဖြစ်နိုင်တာလဲ အဖြေကို ရှာတဲ့အခါ သူကိုယ်တိုင်ကြောင့်ဆိုတဲ့ အဖြေကိုကျ သိပ်လက်သင့်မခံချင်ကြဘူးလေ …
၁၂၃ ရက်တိုင်တိုင် လက်ထိပ်ခတ်ပြီး မခွဲမခွာနေခဲ့ကြတဲ့ ချစ်သူနှစ်ဦး လက်ထိပ်ဖြုတ်ပြီ..
၁၂၃ ရက်တိုင်တိုင် လက်ထိပ်ခတ်ပြီး မခွဲမခွာနေခဲ့ကြတဲ့ ချစ်သူနှစ်ဦး လက်ထိပ်ဖြုတ်ပြီ.. မခွဲမခွာ သေအတူရှင် မကွာနေကြမယ်ဆိုပြီး လက်တစ်ဖက်စီကို လက်ထိပ်တစ်ခုနဲ့ ရက်ပေါင်း ၁၂၃ ရက်တိုင်တိုင် တွဲခတ်ကာ တူတူနေခဲ့ကြတဲ့ ချစ်သူ ၂ ဦးဟာ ခုတော့ အဲဒီလက်ထိပ် ကိုဖြုတ်လိုက် ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီချစ်သူ နှစ်ဦးကတော့ ယူကရိန်းနိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ခါကိဗ်မြို့က အလက်ဇန်ဒါးကဒ်လေနဲ့ ဗစ်တိုးရီးယား ပူစတိုဗီတိုဗာတို့ဖြစ်ကြပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ ချစ်သူများနေ့ ကစလို့ နှစ်ယောက်သား ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် လက်ထိပ်ခတ်ပြီး အတူနေခဲ့ကြတာပါ။ သူတို့ရဲ့ စမ်းသပ်ချက်ဟာ လူမှုကွန်ရက်မှာ လူသိများခဲ့ပါတယ်။ စားအတူ သောက်အတူ အိပ်အတူ ယုတ်စွအဆုံး ရေချိုး အိမ်သာတက်ရင်တောင် အတူတူပါပဲ။ ဒါပေမယ့် …
မိန်းကလေးတွေ ရွဲ့ပြောတတ်တဲ့ စကားအတည်လေးတွေ
မိန်းကလေးတွေ ရွဲ့ပြောတတ်တဲ့ စကားအတည်လေးတွေ မိန်းကလေးတွေ ရွဲ့ပြောတတ်တဲ့ စကား အတည်ေ လးတွေ လာမခေါ်နဲ့! အဲတာခေါ် ခိုင်းတာ မခေါ်ပဲနေကြည့် သေအောင် စိတ် ဆိုးတယ် အေးးးရတယ်လေ! အဲတာ မရဘူးးး ကြည့်နေ ငါပြဿနာ ရှာပြမယ် အဲ့လို ပြီးတာပဲ ! အဲ့တာ မပြီးဘူး မကျေနပ် လို့ပြောတာ ခဏနေ သူပြန်ရွဲ့တော့မှါ ဘာတစ်ခွန်း မှလာမပြောနဲ့! အဲ့တာကောက် သွားတာ အမြှုပ်ထွက်အောင် သွားရှင်းပြ ပြောနိုင်မှ တော်ကာကျမှာ ကြိုက္တာသာလုပ်! ဘာမှသွားမ လုပ်နဲ့ အဲ့တာသူ ပြဿနာရှာဖို့ အဆင် သင့်ပဲ ဆိုတဲ့သဘော ငါ့ကို အဖက်လာမလုပ်နဲ့!ပစ်ထားတာ များသွားပီ …
ချစ်သူကောင်လေးတစ်ယောက်ကို အပိုင်ချုပ်ကိုင်ထားနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းများ
ချစ်သူကောင်လေးတစ်ယောက်ကို အပိုင်ချုပ်ကိုင်ထားနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းများ ချစ်သူရည်းစားတွေရဲ့ဘဝ မှာအရေးကြီးဆုံး အချက်ကတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အပြည့်အဝနားလည်ပြီး သစ္စာရှိဖို့ဖြစ်တယ်။ မိန်းကလေးတွေ အနေနဲ့ အရေးကြီးဆုံး ထဲက တစ်ခုကတော့ချစ်သူရဲ့ စိတ်တွေကို အပြည့်အဝ ချုပ်ကိုင်ထား နိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ယောက်ျားလေးတွေက ထိန်းချုပ်တာတွေ၊ ချုပ်ချယ်တာတွေ မကြိုက်တဲ့အတွက် မသိသာတဲ့ နည်းလေးနဲ့ ဘယ်လိုချုပ်ကိုင်ရမလဲဆိုတာကို ပြောပြပေးမယ်နော် ။ (၁) အရမ်း မချီးကျူးပါနဲ့ ယောက်ျားလေးတွေကို မလိုအပ်ပဲ အရမ်း မချီးကျူးပါနဲ့။ မဟုတ်ရင်သူတို့က သူတို့ကိုသူတို့ ဟုတ်လှပြီထင်ပြီး အရမ်းတွေ ဘဝင်လေဟပ်သွားတတ်လို့ပါ။ ဒါကြောင့် သူတို့ တစ်ခုခုလုပ်ရင်လည်း မဆိုးပါဘူး၊ေ ကာင်းပါတယ် လောက်ပဲပြောပါ။နောက်ဆက်တွဲ မြှောက်ပင့်ပြောဆိုတာမျိုးတွေ အရမ်းမလုပ်ပါနဲ့ ။ (၂) ပြောင်းလဲသွားတဲ့အကျင့်တွေကို ချီးမွမ်းပေးပါ …
ယောကျာ်းတစ်ယောက်ကို အောင်မြင်အောင် ပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့ မိန်းမ “၁၀” မျိုး
ယောကျာ်းတစ်ယောက်ကို အောင်မြင်အောင် ပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့ မိန်းမ “၁၀” မျိုး ယောကျာ်းတစ်ယောက် အလုပ်ကိုင်အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာ ငယ်ရွယ်စဉ်ကသူတို့ရဲ့မိခင်ဖခင်တွေကအဓိကပံ့ပိုး မှုတွေပေးခဲ့ရတာပါ ။ ဒါပေမဲ့အိမ်ထောင်ရက်သားကျ လာတဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့လ က်တွဲဖေါ်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုဟာပိုပြီး အဓိကကျသွားပါပြီ။ ပံ့ပိုးတယ်ဆိုတဲ့အရာဟာငွေကြေးပိုင်းရယ်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျန်တဲ့အချက်တွေနဲ့လည်းအများကြီးဆက်နွယ်နေပါသေးတယ် ။ မိန်းမတစ်ယောက်ဟာယောကျာ်းတစ်ယောက်ကိုအ အောင်မြင်ဆုံးနေရာကိုတွန်းပို့နိုင်သလို အနိမ့်ကျဆုံးဖြ စ်အောင်လည်းဆွဲချတတ် ပါသေးတယ် ။ ဒီတော့ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့နေရာကဘယ်လောက်တောင်အဓိကကျ တတ်သလဲဆိုတာနဲ့ဘယ် လိုအချက်လေ တွေပိုင်ဆိုင်ထားလဲ ဆိုတာကိုကြည့် လိုက်ကြရအောင်။ ( ၁ ) သဘော ထားကြီးပြီး လူအကဲခတ်တော်တဲ့ မိန်းမ သူမဟာ အင်မတန်မှ ပါးနပ် တတ်ပြီး သင်ရဲ့မျက်တတောင် တခတ်တွင်းမှာ သင်ဘာဖြစ်နေလဲ ဆိုတာကို အကဲခတ်ခန့်မှန်းသိရှိနိုင်ပြီး သင်ပျော်နေချိန်မှာ သင်နဲ့အတူပျော်ရွှင် မှုတွေကို …
ကောင်လေးတွေ တိတ်တိတ်လေးသဘောကျရတဲ့ ချစ်သူမိန်းကလေးရဲ့ပုံစံလေးများ
ကောင်လေးတွေ တိတ်တိတ်လေးသဘောကျရတဲ့ ချစ်သူမိန်းကလေးရဲ့ပုံစံလေးများ ကော်လေးတွေဟာ တော်ရုံတန်ရုံ သူတို့ရဲ့ အချစ်တွေကို ထုတ်ဖော်ပြလေ့ မရှိကြပါဘူး ။ ဥပမာ ကိုယ်က သူ့မျက်လုံးထဲ အရမ်းလှ နေပေမယ့်လည်း ခေီးကျူးဖို့ နေနေသာသာ ဘာတွေ ဝတ်လာလဲတို့ ပြောတာ မျိုးလေးတွေပေါ့ ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကောင်လေးတွေရဲ့ စိတ်ထဲ ချစ်သာ မိန်းကလေးကို တိတ်တိတ်လေး သဘောကျရတဲ့ အချိန်လေးတွေ ဟှိနေပါတယ် ။ အဲဒါလေးတွေကတော့ ပြင်ပြင်ဆင်ဆင်နေတာ သူနဲ့တွေ့ဖို့ကို အချိန်ပေးပြီး မိတ်ကပ် လေးတွေ လိမ်းလာတာမျိုး၊ အဝတ်အစား လှလှလေးတွေ မရိုးအောင် ဝတ်လာတာမျိုးဆိုရင် သူတို့တွေ ကသဘောကျ ကြပါတယိတဲ့ ။ အလေးထားသဘို ခံစားရပြီး လူရှေ့သူရှေ့လည်ရ …
ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် မင်္ဂလာဆောင်ခဲ့မှန်း သတိမရတော့တဲ့ ဇနီးအတွက် ဒုတိယမင်္ဂလာပွဲကို စီစဉ်ပေးခဲ့တဲ့ ခင်ပွန်း
ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် မင်္ဂလာဆောင်ခဲ့မှန်း သတိမရတော့တဲ့ ဇနီးအတွက် ဒုတိယမင်္ဂလာပွဲကို စီစဉ်ပေးခဲ့တဲ့ ခင်ပွန်း လူတိုင်းအတွက် စစ်မှန်တဲ့ လက်ထပ်ခြင်းက သူတို့ရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့မှာ သတို့သမီး၊ သတို့သား၊ မိသားစုဆွေမျိုး နဲ့ ရင်းနှီးခဲ့ရတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ စုံစုံလင်လင် ပါဝင်မှသာ လက်ထပ်ယူချင်းလို့ခေါ်ပါတယ် ။ အဲ့ဒီနေ့တွေမှာဆိုသတို့သား ၊ သတို့သမီးတွေက သူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ လူတွေနဲ့ အခြားသောသူတွေအတွက် သူတို့ရဲ့ချစ်ခြင်း မေတ္တာတွေကို ဝေမျှပေးကြပါတယ် ။ လက်ထပ် ယူခြင်းဟာ လူတွေတွက် တစ်သက်မှာ တခါသာ ကြုံတွေ့ရတာကြောင့် မင်္ဂလာဆောင် တဲ့နေ့ကို မကြာခဏ ပြန်ပြီးခံစား ချင်ကြတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ထိမ်းမြှား မင်္ဂလာဆောင်ခဲ့တဲ့နေ့ကို မမှတ်မိတော့ တဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုခံစား …
အခုသင့်နားက ချစ်သူမှာ ဒီအချက် (၄) ချက်ရှိရင် လက်လွှတ်မခံလိုက်နဲ့နော် မိန်းကလေး တစ်ယောက်က သင့်ကို တကယ် ချစ်မိသွားပြီ ဆိုရင် သစ္စာဆိုတာ သင်မတောင်းလည်း သူ့ဖက်ကနေ ပေးပြီးသားပါ သစ္စာရှိပြီး ဘယ်တော့မှ ဖောက်ပြန်မှာ မဟုတ်တဲ့ ချစ်သူကို သင် ပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် သင်ဟာ အရမ်း ကံကောင်းတဲ့ သူ တစ်ယေက် ဖြစ်ပါတယ် တကယ်လို့ သင့် ချစ်သူ ဟာ အခုဖော်ပြပေးတဲ့ အချက် တော်တော် များများနဲ့ ကိုက်ညီနေ ရင်တော့ သင့်အပေါ် အရမ်းချစ်ပြီးဘယ်တော့မှ သစ္စာဖောက်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး အခုသင်ရဲ့ဘေးနားက မိန်းကလေးဆီမှာ ဒီအချက် (၄) ချက်ရှိနေရင် လုံးဝလုံးဝ လက်လွှတ်မခံလိုက်ပါနဲ့နော် …